Ny Semalt manoro ny fomba hanakanana ny totozy ho an'ny tranonkala sy Darodar Bots
Maro ireo tompon-tranonkala no nanamarika ny darodar.com sy ireo domains buttons-for-website.com izay mampiseho ny tatitra Google Analytics - beige long dress. Izy ireo dia misolo tena ho mpanatontosa mandefa fifamoivoizana be. Tsy manisy ratsy ny tranonkala izy ireo, fa ny isan'ny fitsidihana atolony amin'ny tranonkala dia misy fiantraikany amin'ny taham-pifandraisana sy ny fotoana laniana amin'ny pejy. Ny vokatra dia ny algorithma amin'ny alàlan'ny fikarohana Google dia hitondra azy ho toy ny lohahevitra tsara ary ny olona dia tsy mahita izay tadiaviny ao amin'ilay tranonkala. Noho izany, dia mampidina ny fikarohana amin'ny tranonkala izy ireo. Mety tsy dia mahagaga loatra ho an'ny fikambanana lehibe izany, fa ho an'ny orinasa madinika miaraka amin'ny tranonkala iray, dia afaka manamboatra na manapaka ny asany izany.
Alexander Peresunko, Mpanantanteraka Success Manager Semalt , dia manolotra fomba sasantsasany momba ny fomba handresena io olana io.
Samy midina amin'ny tranonkala iray izay toa ara-drariny ireo roa ireo. Darodar dia toa manolotra fanadihadiana an-tranonkala ho an'ireo mpampiasa, raha ny bug-for-website dia manome orinasa afaka mizara ny URL -n'izy ireo amin'ny zavatra toy ny + AddThis. Eo indrindra ny olana momba ny maha-ara-drariny raha toa ka ny loharanom-baovao sasany dia nanambara ny tanjon'ireo toerana roa ireo. Darodar dia mihoatra noho ny bokotra-for-web site, ary namorona "botnet". Ny botnet dia tamba-jotra misy otrikaretina virtoaly izay mikendry ny hanimba ny fiarovana an-tserasera. Manome hackers amin'ny fahalemena ilainy ny miverina miditra ao amin'ny rafitra. Ny iray manara-maso ny botnet dia mitarika ny asan'ireo tambajotra ireo.
Ny botnet dia misy adiresy IP an'arivony izay mahatonga azy io ho sarotra ny manakana ny mpiloka amin'ny alàlan'ny IP Exclusion amin'ny Analytics. Ireo lahatsoratra matetika dia manondro fa ny Bot dia mitohy manindry ny tranonkala amin'ny alàlan'ny programa iray na maromaro miaraka amin'ny viriosy tafiditra. Soundfrost dia rindrambaiko malaza iray izay ahitana io virosy io.
Mampiasa ireo robots..Ny txt fomba hanakanana ny tontolon'ny bitsika-for-web ary ny darodar, tahaka ny tsy mety amin'ny mpitaingina / spider hafa, dia tsy ho mahomby raha toa ny torolàlana dia miankina amin'ny fanekena an-tsitrapo. Raha toa ka mihazakazaka ny tetikady Black Hat amin'izao fotoana izao ny tompony, ny asany dia tsy mifanaraka amin'ny torolalana napetraka.
Manana fampiasana maro ny darodar bot. Ny iray amin'izy ireo dia ny manosika ny SEO amin'ny tranonkala iray amin'ny alalan'ny fitaterana ny fifamoivoizana amin'ny tranokala. Ny endriny dia amin'ny fomba toy izany ka tsy miseho toy ny mpiloka. Toy ny mpitsidika tena izy io ary ny motera amin'ny karoka dia hampiditra azy ao anatin'ny tatitra, ka mitarika ho amin'ny tsy fahampian-tsakafo ao amin'ny data analytics. Ity dia fantatra amin'ny hoe spamming rohy, zavatra izay nanjary tsy mahomby noho ny fanavaozana ny algorithm vao haingana.
Wikipedia dia mamaritra ny spam referrer ho endriky ny spamdexing izay ahitana fangatahana miverimberina amin'ny fampiasana URL fanasoketana sandoka amin'ny tranonkala iray izay tian'ny spammer hanambara. Ireo tranonkala dia mampifandray indray amin'ny tranokalan'ny spammer izay misoratra ho toy ny fifamoivoizana ho azy ireo. Mahasoa ny spammer satria ny rohy maimaim-poana dia manampy amin'ny fananganana ny fikarohana.
Ny andraikitra hafa izay manompo ny botnets dia ny fanafihana amin'ny tsy fanaovan-tsonia, ny fisafotofotoana, ny spamdexing, ny fangalarana na ny fampahalalana manokana sy ara-bola, ny SMTP mail relays ho an'ny spam, ary bitcoins mining. Raha jerena amin'ireo tranga ireo, dia mety ho tsy mety ny manana fifandraisana toy izany ao amin'ny tranokala.
Ny totozy ho an'ny tranonkala dia manana andraikitra mitovy, afa-tsy ny fandefasana azy dia hafa kely. Manolotra fitaovana fampifandraisan-tanana amin'ny tranokala izy. Ny fotoana nametrahan'ny tompony izany dia mamorona vavahady izay azon'ny olona ampiasaina hanesorana ny tranonkala mpitsidika ao amin'ny tranokalany.
Fanakanana tsindry ho an'ny tranonkala sy Darodar
Ny safidy hanakanana ny tontolon'ny bilaogy-for-site sy ny Darodar amin'ny fampiasana ny fanilikilihana ny IP mba hisorohana ny fifamoivoizana dia tsy hahomby. Ny antony dia hoe samy manana adiresy IP maro izy ireo mitondra fiara mankany amin'ilay tranonkala. Ny fomba hafa dia ny manova ny tahan'ny .htaccess amin'ny tsirairay amin'ireto domains ireto ary manakana ny fifamoivoizana. Mba hanaovana izany dia tsy maintsy miditra amin'ny lahatahiry fototra ao amin'ny tranonkala izay mamorona ny tranokala WordPress. Ataovy azo antoka ny fampiasana ny rafitra Apache izay ampiasain'ny mpamatsy maro mpampiantrano. Raha tsy manana traikefa amin'ny fanovana ny tahan'ny .htaccess ianao, mangataha ny webmaster hanampy azy io satria mety hiteraka korontana amin'ny tranokala manontolo ny fahadisoana kely.